पर्खाइ - News Portal from Nepal
करिब चार घन्टा पर्खनु पर्ने भयो ।
एउटा भव्य महलको भव्य पसलमा छु । भव्य यस मानेमा पसलको सजावट भव्य छ । पसलमा सुविधाहरू पूरापुर छन् । जस्तोकी कफी जतिपनि पिउन पाइन्छ । तातो–चिसो पानीको सुविधा भरपूर छ । वाइफाइ चलाएजति पाइन्छ । गर्मीमा एसी र जाडोमा हिटर आदि ।
पसलमा (पसले र म) हामी दुई छौँ । हामी दुवैको काम हो कुर्नु । पसले ग्राहक कुरिरहेछ; म सामान ।
संसारमा बोलीको उच्चतम प्रयोग नै व्यापारीले गर्छ । व्यापार आफैँमा एउटा कला पनि हो । मीठो–नरम बोली र आकर्षक अनुहारले व्यापारमा फरक पक्कै पार्छ । हर–कोहीका आँखाले सबैभन्दा पहिले राम्रो कुरा नै हेर्न खोज्छन् । राम्रो कुरा नै देख्न चहान्छन् । पसल आकर्षक हुनुमा सजावटको मुख्य भूमिका हुन्छ । एउटी सुन्दरीको देहमा पोतिएको शृङ्गार जस्तै हो सजावट ।
सुरूका केही मिनेट पसलको सजावट हेर्दै, पसलेको मीठो बोली सुनेर गुजारें । तर मैले त यहाँ घन्टौँ बिताउनु छ । जसरी एकै हास्यरसले बारम्बार हाँस्न सकिँदैन । उसरी नै घन्टौँ बिताउन सजावटका साधारण कुराहरू मात्र काफी भएनन् । मैले विकल्प खोज्नैप¥यो ।
दायाँ–बायाँका पसलहरू नियालें । फरक–फरक देशका प्राय एउटै (दलाली) स्वभाव भएका ग्राहकहरू नियालें । उसो त गफाडीको ‘ग’ नै हुँ म । मलाई मान्छेहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न खुब आनन्द लाग्छ । ‘गफ पनि हुने समय पनि कट्ने, नयाँ नयाँ भाषाको मजा पनि लिइने’ सोचेर फरक फरक पसलमा सामानहरूको फरक–फरक तरिकाले मोलमोलाई गरें । ग्राहक कुरिरहेका पसलेहरूसँग जिस्किएँ । सामानहरूको अनावश्यक विशेषताहरू सोधें । डिस्काउन्ट बारबार गर्न लगाएँ । कतिलाई अर्को हप्ता आउने आश्वासन बाँडे । कतिलाई महँगो भयो भनें । कतिमा वारेन्टी, ग्यारेन्टी खोजें । यसो गर्दा कति व्यापारीहरू मसँग रिसाए । कति व्यापारीहरू झर्किए पनि । कतिले मलाई सामान बिकाउन आफ्नो कलाको उच्चतम् प्रयोग गरे । कतिले मेरो हाउभाउ र पहिरन हेरेर मेरा प्रश्नहरूको जवाफ नै फर्काएनन् । कति भने जिस्कने स्वभावका पनि भेटिए ।
स्मोकिङ जोनमा गएँ र एउटा चुरोट सल्काएँ । सकभर बिस्तारी चुरोट तान्न थालें । ताकि खेर जानुपर्ने मध्येको केही समय यसै खेर जाओस । स्मोकिङ जोन पनि भरिभराउ छ । समयमा चल्ने प्राय व्यस्त हुन्छन् यहाँका मान्छेहरू । काम गर्दा होस, खाँदा होस, हिँड्दा होस या त अरू जेसुकै गर्दापनि उनीहरूको थेगोजस्तै हुन्छ ‘छिटो छिटो ।’ त्यसो त प्रगति पनि उनीहरू छिटो छिटो नै गर्छन् ।
चुरोट तान्नेहरूको भीडमा पनि म मात्र भए । सुस्तरि चुरोट पिउने । मैले एउटा चुरोट पिइसक्दा मजस्तै अरूपनि चुरोट पिउने तर समय सुस्तरी नकटोस् भन्नेहरू फेरिए । कति फरक छ मान्छे–मान्छे बिचमा समयको रूप पनि । कसैलाई त्यही समय दोब्बर भइदिए हुने जस्तो, कसैलाई त्यही समय दोब्बर छिटो कटिदिए हुने जस्तो ।
चुरोट पिएपछि अब के गर्ने ? गन्तव्य नभएको यात्री जस्तो, लय भत्किएको जिन्दगी जस्तो, म रित्तो भएँ । मेरो मगजले समय कटाउने नयाँ आइडिया फुराएन । म बुझ्दैछु – बिना सोच, बिना गन्तव्य एक पाइला चाल्न पनि सकस पर्दो रहेछ ।
जिन्दगीमा धेरै कुराहरू भोगें । धेरै कुराहरू गरें । अझै कयौँ दुःख–सुखका जंघारहरू तर्न बाँकी नै छ । त्यही माथि सपना र कल्पना नाथे त कति हुन् कति छन् । तर पनि यतिबेला मेरो मगज पूराका पूरा शून्य भइराखेको छ । मगज रित्तिनु दुःखको बिम्ब रहेछ । हुन त समयकै एक किस्सा हुुँ म पनि । त्यहि किस्सा भरिको आयू बाँच्नेछु । त्यहि किस्साभरि जे–जे गर्नुछ गर्नेछु । आज भने त्यही मूल्यवान एक किस्सा समयको चार घन्टा बेअर्थमा खेर फाल्नु छ मलाई । बुझ्दैछु बेअर्थमा कुनै कुरा खेर फाल्नपनि कति सकस पर्दोरहेछ । कति गाह्रो हुँदोरहेछ ।
थाकेको मन लिएर शौचालयसम्म पुगें । कुनै धनाट्यको घरको बैठक कोठा जतिक्कै सजिसजाउयुक्त छ शौचालय । उत्ति नै सफा पनि । मैले आफू हुर्केको भूगोलको सार्वजनिक स्थलमा अवस्थित सार्वजनिक शौचालय सम्झिए । अनयासै मलाई हाँस्न मन लाग्यो । फिस्स मुस्कुराएँ ।
‘आफ्नो यथार्थ र धरातर सम्झिएर आफूले आफैंलाई कतिदिन मजाक उडाइराख्नु पर्ने होला ?’ एक मनले प्रश्न गर्यो । ‘उसो त मान्छेले मजाक पनि आफैंलाई नै बनाउने त हो । आफ्नै सवल र दुर्वलताहरूसँग रमाउने, पिरोलिने हो ।’ अर्को मनले सान्तवना दियो । क्षणभरमै म गम्भीर पनि भएँ ।
शौचालय संगीतमय छ । त्यही संगीत सुन्दै भरसक समय छिटो नकटोसको मनोभावमा निकैबेर अलमल गरिरहें । बिना जरुरी हातमुख धोएँ ।
‘अहो दाह्री काट्नै बिर्सिएछु ।’ दाह्री काट्न बिर्सिएको बल्ल पत्तो पाएँ । ‘टाउकोका एक–दुईवटा रौँ फुलेछन् । पहिलेभन्दा तालु पनि निकै खुइलिएछ । निधारमा बुढ्यौलीका धर्साहरू देखिन थालेछन् ।’ ऐनामा आफूलाई निकैबेर नियाँले । फुर्सदमै त हो मान्छेले आफूले गर्न बिर्सिएका कुराहरू सम्झने ।
यतिञ्जेल सम्ममा कयौँपटक घडी हेरिसकेको छु । फेरि पनि हेरें । मिनेट काँटा किन सेकेन्ड काँटाजस्तो दौडन सक्दैन ? घन्टा काँटा किन यति साह्रो थाकेको ? किन मान्छेमात्र सेकेन्ड काँटाजस्तो भइरहनु पर्ने ? कयाँै बेतुकका सवालहरूले मस्तिष्क बोझिलो बन्यो ।
सामान लिनुपर्ने पसलमा फर्किए र ग्राहककै लागी भनेर राखिएको कुर्सीमा बसें । पसले मलाई हेरेर थोरै मुस्कुरायो । पसलेको धर्म हो मुस्कुराउनु । मान्छे रिसाएको भन्दा खुसी भएको बेलामा आफ्ना कुराहरू राख्न सजिलो हुन्छ । मैले उसको मुस्कानको फाइदा उठाएर कमसल सामान मलाई भिडाएकोमा आक्रोस पोखें । उसले तत्कालै आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्यो । माग्नुपर्नेजति माफी माग्यो । मैले दुःख पाएकोमा क्षमायाचना गर्यो र अर्को ग्राहक कुर्न थाल्यो ।
कसरी काट्न सकौंला यी चार बर्षजस्ता चार घन्टाहरू ? अल्लारे मनले म सोच्न थाल्छुु । यतिबेला कुनै राम्री केटीले म्यासेन्जरमा टेक्स्ट गर्नु नि ! ता कि म उसँग च्याट गरेर समय कटाउन सकूँ । म सोच्छु; कसैले कुनै गेमको रिक्वेस्ट पठाउनु नि ! ता कि म गेम खेलेर समय कटाउन सकूँ । या त कुनै साथीले राम्रो मुभी सजेस्ट गर्नु नि…! तर कुनै विकल्पहरू खुल्ला भएनन् । कहाँ गए ती केटी साथीहरू जसले म व्यस्त भएको बेलामा समय दिन नसक्ने भनेर मसँग रिसाएका थिए । कहाँ गए ती साथीहरू जसले कुनै बेला फेसबुकमा गेमको रिक्वेष्ट पठाएर मेरो दिमाग खराब बनाएका थिए । कहाँ गए ती साथीहरू जो फिल्म भनेपछि खान पनि बिर्सिन्थे ? फेरि सोच्छु; मतलबी दुनियाँमा मेरो निजी स्वार्थसँग के मतलब दुनियाँलाई । मान्छेलाई आफ्नै स्वार्थको परिधिभन्दा बाहिर निस्किने फुर्सद नै कहाँ पो छ र ? म स्वयम् पनि कहिले पो आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहिर रहें र ? आज पनि त आफ्नै स्वार्थका लागी उनीहरूलाई सम्झिरहेको छु ।
निकैबेर झोक्राई बसें । यत्तिकैमा मेरा नजर सामुन्नेको पसलेमा पर्छन् । हुन त अघिदेखि उसलाई म बारम्बार आक्रोसका नजरहरूले हेरिराखेको छु । तर, यसपाली मेरा नजरहरूसँग मेरो मगज पनि उसमा पर्छ । कौतुहलपूर्ण नजरले म उसलाई हेर्न पुग्छु ।
ऊ पनि मैैैैले सामान कुरेजस्तै ग्राहक कुरिरहेछ । ऊ पनि त मजस्तै कुरुवा हो । म सोच्न थाल्छु; यतिबेला उसको मस्तिष्कमा के होला ? सोच्दासोच्दै अन्दाज लगाउन थाल्छु; ऊ सोच्दो हो कुनै एउटा धनाड्य ग्राहक आइदियोस् र उसको पसलमा भएको सबैभन्दा रोज्जा सामान किनिदेओस् । जसबाट ऊ धेरै नाफा कमाउन सकोस् । धेरै नाफा कमाए उसले सहजै पसलको रेन्ट तिर्न सक्छ । मासिक किस्ताहरू होलान्; तिर्न सक्छ । बिजुली, पानी, वाइफाई सबै सेवा सुविधाको बिल चुक्ता गर्न सक्छ । छोरा–छोरी भए राम्रा गुडिया किनिदिन सक्छ । श्रीमतीलाई कतै नयाँ ठाउँमा घुमाउन लान सक्छ । रहर लागेको खान सक्छ । रहर लागेको गर्न सक्छ । बुबा आमालाई कुनै राम्रो गिफ्ट किनिदिन सक्छ । कोही नभए महँगो रक्सी पिएर कुनै यौनकर्मी महिलासँग रात कटाउन सक्छ । आज नसकिएर उम्रिए भोलिको लागी केही बचत गर्न सक्छ ।
यत्तिकैमा म उसलाई बेप्रसंग सोधिदिन्छुु “साहुजी, यतिबेला तिम्रो मगजमा के कुरा खेल्दै छ?”
ऊ मतिर फर्किन्छ र फिस्स हाँसिदिन्छ । मानौँ उसको मगजमा केही पनि छैन । मानौँ उसको पनि मेरोजस्तै मगज शून्य छ ।
म उसको हाउभाउ पढ्न थाल्छु । यतिबेला म उसलाई नियाली रहेछु । उसका नजरहरू पसलमा कम सामुन्नेको लिफ्टमा ज्यादा परिरहेछन् । ऊ एकदम आशावादी नजरले सामुन्ने फाट्टफुट्ट ओहरदोहर गर्ने ग्राहकहरू हेर्छ । ऊ परैबाट कुनै ग्राहकले आफूतिर हेरे–नहेरको कन्फम नगरिकन उक्त ग्राहकलाई नमस्कार गर्छ । ग्राहकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ऊ फेरि अर्को ग्राहकलाई नमस्ते गर्छ । यो क्रम चलिरहन्छ । उसको पसलमा कुनै ग्राहक आउँदैनन् । तर ऊ थाक्दैन । पर्खिरहन्छ । कुरिरहन्छ ।
पसलभित्र एउटा ठूलो टिभी पनि छ जहाँ पसल वरपर छरिएर रहेका सीसी क्यामेराहरूका फरक–फरक फुटेजहरू देखिइरहेछन् । पसले त्यही टिभीमा पुलुक्क हेर्छ । त्यहाँ त्यसले अरूभन्दा विशेष केही देख्छ । सायद ग्राउण्ड फ्लोवरको क्यामेरा हुनुपर्छ । त्यो क्यामेराको सामुन्ने निक्कै धनाढ्य जस्तो सुटेट, बुटेट, ड्रेसअप गरेको एउटा मान्छे लिफ्ट पर्खिएर बसिरहेछ ।
पसले अलि सतर्क हुन्छ । ऊ पसलमा चारैतिर नजर डुलाउँछ । सामानहरूको सजावट ठीक भए नभएको कन्फम गर्छ । हतारहतार टालोले अगाडिको सीसा पुच्छ । सोकेसमाथिको ऐनामा आफूलाई पनि नियाल्छ । आफ्नो टाइको नट राम्ररी मिले नमिलेको जाँच्छ । उसले लगाएको सर्ट कतै मुजा परेको दोब्रिए नदोब्रिएको कन्फम गर्छ । पसलकै एक कुनाबाट रूम स्प्रे निकाल्छ र पसलमा छर्कन्छ । त्यसपछि फेरि सीसीक्यामेराको फुटेज हेर्छ र लिफ्टतिर हेर्छ ।
पसलेको हाउभाउ हेर्दा लाग्छ उक्त मानिस उसकै पसलमा आउनेवाला छ र पसलकै रोज्जा सामान किनेर जाने छ ।
नभन्दै लिफ्टबाट उक्त मान्छे फुत्त बाहिर निस्कन्छ । पसले बडो इमान्दार भएर उसलाई नमस्कार गर्छ । आगन्तुकले पुलुक्क उसतिर एक नजर हेरिदिन्छ । पसले ठूलै युद्ध जितेको मनोभावमा गमक्क पर्छ । तर दुर्भाग्य उक्त ग्राहक उसको पसल छेवैमा आएर अर्को पसलतिर लागिदिन्छ ।
भर्खर सम्म पसलेको मुहारमा उदाएको चन्द्रमा एकाएक अस्ताउँछ । क्षणभरमै उसको अनुहार औँशीको रातमा परिणत हुन्छ । ‘सामानको सजावटमा पो कुनै कमी कमजोरी भयो कि’ भन्ने सोचेर ऊ पसलका सबै सामान र सजावटहरू हेर्छ र खिन्न मन लगाउँछ । सायद उसले सोचेको हुनुपर्छ भर्खरै सीसा पुछ्दा प्रयोग भएको क्लिनर खेर गयो । पसलमा छर्किएको महँगो रुम स्प्रे खेर गयो । सजावटका लागि टाँगिएका वरिवरिका बत्तीहरूले फोकटमा बिजुली खर्च गरे । यतिबेरको उसको समय पनि त खेर गयो । बे–अर्थमा कुनै कुरा किन पो गुमाउन चहान्छ र मान्छे ? ऊ कुनै ग्राहकको लागी आफूले गरेको लगानी र उसले कमाएको मुनाफाको मझधारमा बारबार आफूलाई नियाल्छ । अर्को पसलमा उक्त ग्राहकले किनेको सामान हेरेर घुटुक्क थुक निल्छ ।
“दुर्भाग्य, त्यो ग्राहक तिम्रो पसलमा किन छिरेन?” म फेरि फ्याट्ट सोधिदिन्छु ।
ऊ पुलुक्क मतिर हेर्छ र फेरि पनि फिस्स मुस्कुराउँछ । खासमा यतिबेला ऊ मुस्कुराउनु हुने थिएन । मैले गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न गरेको थिएँ । लाग्छ उसले मुस्कुराउन सिवाय अरू जानेकै छैन ।
यत्तिकैमा उसको पसलमा पहिलो ग्राहक आइपुग्छ । ऊ आफूमा भएको, व्यापार गर्दा उसले आजसम्म सिकेको सबै कला प्रयोग गरेर उक्त ग्राहकले केही सोध्नुभन्दा अगाडि नै भनिदिन्छ “सबैभन्दा राम्रो र सस्तो सामान दिने पसल मेरै हो । मेरा धेरै ग्राहकहरू छन् । अरूभन्दा डिस्काउन्ट धेरै दिन्छु । सामानमा छ महिना पसलबाट ग्यारेन्टी बसिदिन्छु ।” ऊ बोल्दाबोल्दै ग्राहकको हातमा एककप कफी थमाउन भ्याउँछ । ग्राहक कफी समात्छ र ओठ लेपर्याउदै बाटो लाग्छ ।
पसले रूनमात्र सक्दैन । पुर्पुरोमा हात राखेर थचक्क भुइँमा बस्छ । केहीक्षणअघि कफी बनाउँदा उसले कफीको खोल डस्बिनमा मिल्काउन भ्याएकै हँुदैन । ऊ त्यही कफीको खोल एकदम टिठलाग्दो पाराले हेर्छ । एकदम मायालाग्दो पाराले डस्बिनमा फाल्छ ।
म दोस्रोपटक शौचालय जान्छु र फर्कन्छु । घडी हेर्छु, दुई घन्टा पनि बितेको हुँदैन । लामो श्वास तान्छु र पानी पिउन थाल्छु । पसले मैले पानी पिएको देखेर ‘नपिइदेन मेरो पानी सकिन्छ, अर्को पानी किन्न पैसा छैन । कुनै ग्राहक आएका छैनन्’ भन्ने भावले मलाई हेर्छ । र हेर्दाहेर्दै उसले उसको हेर्ने नजरको भाव परिवर्तन गरेर ऊ मलाई शंकाको नजरले हेर्न थाल्छ । सायद उसले सोचेको हुनुपर्छ ‘बिहान बिहानै बिग्रिएको सामान लिएर आइस् र मेरो व्यापार राम्रो भएन । तँ बसेकै कारण ग्राहकले मेरो अनुरोध पत्याएनन् । अलिच्छिना मान्छे होस तँ ।’ म उसको भाव बुझेजस्तो गर्छु । तर म के पो गर्न सक्थें र ? म पनि त विवश छु पर्खन । उसको हेराइलाई बेवास्ता गरिदिन्छु ।
फेरि पसलमा अर्को ग्राहक आइपुग्छ । हेर्दा सुटेड, बुटेड नै देखिन्छ ग्राहक । फेरि पसले आफ्नो सम्पूर्ण कला प्रयोग गर्छ । ग्राहक पनि पसलका महँगा महँगा सामानहरू हेर्न सोध्न थाल्छ । पसले सबै सामानको बढाइचढाइ व्याख्या गर्न थाल्छ मानौँ उसले सबै सामानको प्रयोग गरेको छ । सबै सामानको विशेषताहरूसँग परिचित छ । सबै सामानहरू ऊ स्वयमले बनाएको हो ।
“यसको कति? फाइदा के? डिस्काउन्ट कति ? वारेन्टी कहिलेसम्म ? म अरू पनि ग्राहक ल्याइदिन्छु मलाई के दिन्छस ? दस पिस लान्छु मलाई थप कति डिस्काउन्ट दिन्छस ?” ग्राहक चतुर निस्किदिन्छ ।
पसले बारबार क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरिरहन्छ । प्रत्येक पटक अन्तिम मूल्य भनेर थोरै घटिरहन्छ । लामो समय मोलमोलाई चल्छ । अन्तिममा ग्राहक मन्द मुस्कुराएर भन्छ, “सबै थोक राम्रा रहेछन् । अरू पसलभन्दा तेरो पसल सस्तो रहेछ । डिस्काउन्ट राम्रो दिँदो रहेछस् । म अर्को हप्ता तेरै पसलमा आएर सामान किन्छु ।”
पसले खिन्न मन लगाउँदै आफ्नो भिजिटिङ कार्ड ग्राहकलाई दिन्छ । आफ्नो पसल नम्बर भन्छ । पसलसम्म आउने छोटो बाटो देखाउँछ ताकि कथमकदाचित् उक्त ग्राहक अर्को हप्ता आइहाले झुक्किएर अर्को पसलमा नपसिदेओस् ।
अब युद्धमा हारेको सिपाही र पसलेमा केही भिन्नता छैन । पसलेमा कुनै उर्जा छैन । उसको मस्तिष्कमा बेचैनी सुरू हुन्छ । उसले आजको दिनमा कमाउनुपर्ने नाफा कमाउन सकेको छैन । व्यापार घाटा छ । ऊ वरपर गर्छ । छटपटाउन थाल्छ । यतिबेला सम्ममा उसलाई पिसाब लाग्नुपर्ने हो, लागेको छैन । तिर्खा लाग्नुपर्ने हो, लागेको छैन । भोकाउनुपर्ने हो, भोकाएको छैन । हुन त बिना कमाइ, बिना स्रोत भोक प्यास नै कहाँ पो लाग्छ र ? लागे नै पनि तिनीहरूको के अर्थ ? बरू गरिबी र अभावले भोक होइन धैर्य र सहनसिल बनाउँछ मान्छेलाई । ऊ हिम्मत हार्दैन । बरू धैर्यले अर्को ग्राहक कुरिरहन्छ; पर्खिरहन्छ ।
“कस्तो मान्छे रहेछ ! त्यसो नगर्नुपर्ने । तिम्रो समय मात्र खेर फालिदियो” म अघि आफूले समय कटाउने बहानामा अरू पसलेलाई दिएको दुःख बिर्सिएर भनिदिन्छु ।
पसले यसपाला पनि मतिर हेर्छ र फिस्स मुस्कुराउँछ । तर यसपटक उसको मुस्कानमा उत्साह पटक्कै छैन । मुस्कान खुसीको बिम्ब हो तर पसलेको मुस्कानले दुःखको भाव बोलिरहेछ । कस्तो अचम्म, मुस्कानले पनि दुःख बोल्न सक्दो रहेछ । मुस्कानभित्र पनि पीडा हुँदो रहेछ । पीडामा पनि त मान्छे मुस्कुराउन सक्दो रहेछ । तर, मुस्कानमा पीडा कति पनि नसुहाउँदो रहेछ । मुस्कानमा खुसी नै मिसिनुपर्ने रहेछ । त्यसैले त देउराली पहाडको थाप्लोमै बनाइँदो रहेछ ता कि यात्रीले मीठो हावासँग जिन्दगीकै स्वर्णीम श्वास फेर्न सकोस् । त्यसैले त प्राय चौताराहरू भञ्ज्याङमै बनाइँदो रहेछ ता कि भरियाले भारी बिसाउँदा छेउछाउमा घुटुक्क गला भिजाउने जरूवा होइदियोस् ।
म पसलेलाई हेर्न छाडेर उसकै बारेमा कल्पन थाल्छु, ‘आजसम्म यसले कति ग्राहक पर्खियो होला ? अझै कति पर्खेला ? कहिलेसम्म पर्खेला ? पर्खाइको पीडामा कति छटपटाउला ? जवाफ मसँग छैन । सायद उसँगपनि छैन । कतिपय प्रश्नहरू प्रश्नमै सीमित हुन्छन् ।’
पर्खनु कति गाह्रो काम रहेछ, म पसलेलाई छाडेर सोच्न थाल्छु, जीवनको अन्तिम आयु बाँचिरहेका बृद्ध बृद्धाले कसरी कुर्दा हुन् आफ्नो मृत्यु ? कसरी कुर्दो हो मृत्युदण्ड सुनाइएको अपराधीले आफू सुली चढ्ने दिन ? रोगीहरूले कसरी कुर्दा हुन् रोगको निदान ? किसानले कसरी कुर्दो हो अनाज भित्र्याउने समय ? परिक्षार्थीले कसरी कुर्दो हो नतिजा ?श्रमिकले कसरी कुर्दो हो तनखा ? यात्रीले कसरी पच्छ्याउँदा हुन् गन्तव्य ? भोकोले कसरी पर्खदो हो भोजन ? प्रेमीले कसरी पर्खदा हुन् आफ्नो प्रेम ? बचेराहरूले कसरी कुर्दा हुन् आमा ?
सबै कुरा बिर्सिएर म आफैँले आफैँलाई नियाल्न थाल्छु । जिन्दगीमा आफूले पर्खिएका कुराहरू सम्झन थाल्छु । जस्तोकी केटाकेटीमा एउटा नयाँ लुगाको लागी दसैँ कुरिन्थ्यो । एक पुरिया बिस्कुटको लागी औँशी पूर्णीमा (हाटरबजारको दिन बजारबाट आउँदा बुबा ममिले बिस्कुट ल्याइदिनु हुन्थ्यो) कुरिन्थ्यो । मीठो मसिनो खान चाडवाड कुरिन्थ्यो ।
अलि ठूलो भएपछि परीक्षा, नतिजाहरू कुर्न थालियो । आज धन सम्पत्ति, खुसी, मोज–मस्ती कुर्दैछु । भोलि जिन्दगी अलि बुढिएपछि रोगव्याधीहरूसँग उपचार कुर्नुछ । कुर्दाकुर्दै एकदिन मृत्यु पनि त कुर्नु छ । कताकता मगजमा चेत पलाएजस्तो हुन्छ, आखिर जिन्दगी पनि एउटा पर्खाइ न रहेछ ।
जिन्दगीमा सबैभन्दा गाह्रो काम पो रहेछ कुर्नु । प्रत्येक सेकेन्ड घण्टा जस्तो लाग्दो रहेछ । प्रतिक्षार्थीहरूको समय उल्टो चल्दो रहेछ ।
‘हरेक मन–मस्तिष्कलाई मनोरञ्जन दिइरहन सकूँ’
कति छ विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्पत्ति ?
कलाकारका लागि अभिनय विनाको जीवन ‘कोमा’ जस्तै हो
मधेश राजनीति र पहिचानको सवाल
चलचित्रमा महिलाका अनुहार मात्र आए, भावना आएनन्
संयुक्त कविता संग्रह ‘उज्यालोका मालीहरू’ सार्वजनिक
कपिलवस्तुमा मृत भेटियो निलगाई
स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै कोरोना भाइरस
वामदेवलाई फेरि धोका, राष्ट्रियसभामा खतिवडाकै निरन्तरता
नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणमा पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई तानिँदै